ယိုကိုဟားမား ရူးစေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျပန်လူမျိုး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ်
ယိုကိုဟားမား ရူးစေး (横浜 流星, Yokohama Ryūsei?, စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၁၉၉၆ မွေး‌ဖွား) သည် ဂျပန်လူမျိုး သရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် Stardust Promotion အေဂျင်စီ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် Super Sentai အမျိုးအစား ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော Ressha Sentai ToQger ၌ Hikari Nonomura (ToQ 4gou) အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကာ လူသိများလာခဲ့သည်။
(1996-09-16) စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၁၉၉၆ (အသက် ၂၅)
ယိုကိုဟားမား၊ ခနဂဝစီရင်စု၊ ဂျပန်
၁၇၄ စင်တီမီတာ (၅ ပေ ၈ လက်မ)
ဆဋ္ဌမတန်း အရွယ်၌ လျူးစေးသည် မိသားစုနှင့်အတူ ဟာရာဂျူကူသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီး Stardust Promotion သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လျူးစေးသည် ထိုရုံးမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည့် Ebidan အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ယိုကိုဟားမား၏ ပထမဆုံး အနုပညာခြေလှမ်းမှာ Eiko Seminar ၏ ကြော်ငြာတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။ သူသည် လူရွေးပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်၍ Nikopuchi မဂ္ဂဇင်း၌ အမျိုးသားမော်ဒယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လျူးစေးသည် Menmo တွင် နံပါတ် (၁) မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပင် Kamen Rider Fourze တွင် ပွဲဦးထွက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လျူးစေးသည် Real Onigokko The Origin အမည်ရှိ ဒရာမာတွင် မကြာခဏ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Ressha Sentai ToQger တွင် Hikari Nonomura (ToQ 4gou) အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် လျူးစေးသည် men's model of Nicola မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၂၀ တွင် လျူးစေးသည် Ganryujima stage play အတွက် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ကိုယ်ပူဖျားနာခဲ့သောကြောင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ COVID-19 တွေ့ရှိရကြောင်း ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အေဂျင်စီဖြစ်သည့် Stardust Promotion မှလည်း လျူးစေး၌ ပိုးတွေ့ရှိရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီး ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်၍ ကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၀ တွင် လျူးစေး ယိုကိုဟားမားသည် ဆေးရုံဆင်းပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၂ ပတ် self-isolation ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်း၏ အင်စတာဂရမ်မှတစ်ဆင့် အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၄ Zyuden Sentai Kyoryuger vs. Go-Busters: The Great Dinosaur Battle! Farewell Our Eternal Friends ToQ 4gou (Voice)
Heisei Rider vs. Shōwa Rider: Kamen Rider Taisen feat. Super Sentai Hikari/ToQ 4gou
Ressha Sentai ToQger the Movie: Galaxy Line S.O.S. Hikari/ToQ 4gou
၂၀၁၅ Ressha Sentai ToQger vs. Kyoryuger: The Movie Hikari/ToQ 4gou
၂၀၁၆ Zen'in Kataomoi Yoshinari အပိုင်း ၇: Eve no Okurimono
Wolf Girl and Black Prince Takeru Hibiya
၂၀၁၇ Tenshi no Iru Toshokan Kōsuke
Kiseki: Sobito of That Day Navi
၂၀၁၈ Honey Ayumu Misaki
My Brother's Friend Sōta Nishino ဇာတ်ဆောင်
Rainbow Days Keiichi Katakura ဇာတ်ဆောင်
We Are Ryō
၂၀၁၉ Aiuta: My Promise to Nakuhito Tōru Nomiya ဇာတ်ဆောင်
L-DK: Two Loves, Under One Roof Reo Kugayama
Cheer Boys!! Haruki Bandō ဇာတ်ဆောင်
Go Away, Ultramarine Nanakusa ဇာတ်ဆောင်
၂၀၂၀ Your Eyes Tell Rui Shinozaki ဇာတ်ဆောင်
၂၀၁၁ Kamen Rider Fourze Jiro Iseki TV Asahi အပိုင်း ၁၇ နှင့် ၃၂
၂၀၁၃ The Chasing World: The Origin Hiroshi Sato TBS
၂၀၁၄ Ressha Sentai ToQger Hikari Nomomura/ToQ 4gou TV Asahi
၂၀၁၆ Sennyuu Sousa Idol Deka Dance Sho/Shokichi Deka Dance TV Tokyo
၂၀၁၇ Kaijuu Club Kuusou Tokusatsu Seishunki Katsuo MBS
2018 Shiro to Kiiro Ryosuke Mitsuyama Amazon Prime
Kareshi wo Loan de Kaimashita Jun Setsuna dTV
Brother's Friends Sota Nishino TBS, MBS
၂၀၁၉ Hajimate Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi Kyohei Yuri TBS
Your Turn to Kill Shinobu Nikaido NTV
Tobira no Mukou Shinobu Nikaido Hulu
Anata no Ban Desu Season2Shinobu Nikaido NTV, Hulu
4-punkan no Marigold Ai Hanamaki TBS
၂၀၂၀ Panda Judges the World Naoki Morishima NTV ဇာတ်ဆောင်
Something's Wrong with Us/Cursed in Love Tsubaki Takatsuki NTV ဇာတ်ဆောင် 
၂၀၁၉ 12th International Drama Festival in Tokyo Best Supporting Actor A Story to Read When You First Fall in Love ဆုရရှိ
၂၀၂၀ 43rd Japan Academy Film Prize Newcomer of the Year Aiuta: My Promise to Nakuhito, Cheer Boys!! and Go Away, Ultramarine ဆုရရှိ
44th Elan d'or Awards Elan d'or Award for Newcomer of the Year Himself ဆုရရှိ
↑ ၁.၀ ၁.၁ "『トッキュウジャー』横浜流星、「どんな色にも染まれる役者に」" Oricon Style (October 23, 2014)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Official profile at Stardust Promotion။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ "『キャラフルSTARS』王子様系キャラの横浜流星インタビュー" Smart Boys (January 3, 2014)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "質問返し！" Ryusei Yokohama's official blog (June 17, 2013)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "質問返し！" Ryusei Yokohama's official blog (July 16, 2013)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Official profile at Nicola။ 2015-03-16 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "質問返し！" Ryusei Yokohama's official blog (May 7, 2013)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ "横浜流星ら「nicola」メンズモデル、卒業ステージで感極まる ファンへ"ラスト"メッセージ" Model Press (March 26, 2015)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "横浜流星 INTERVIEW - プラスアクト" Wani Books (June 5, 2013)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "1月1日" Ryusei Yokohama's official blog (January 1, 2014)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "初の列車モチーフ『烈車戦隊トッキュウジャー』お披露目 関根勤、38年ぶり戦隊シリーズ出演" Oricon Style (January 26, 2014)။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "横浜流星 目に涙ため会見！志尊淳けん玉エピソードで感心" Geino News Lounge (January 26, 2014)။ 10 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 横浜流星、新型コロナ感染で入院 所属事務所「病状の回復に全力で努めております」။
↑ 横浜流星 on Instagram: “本日無事に退院しました。 この度は沢山の方々に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び致します。…” (in en)။
↑ Cursed in Love။ Nippon TV။ June 24, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Official profile at Stardust Promotion (in ဂျပန်)
Official profile at Nicola (in ဂျပန်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယိုကိုဟားမား_ရူးစေး&oldid=655713" မှ ရယူရန်
၂၁ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။